Allgedo.com » Ganacsade Dr. Maxamed Burhaan oo maanta dhaawac loogu geystay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta dhaawac loogu geystay Dr. Maxamed Burhaan Axmed Deeq oo ah aqoon yahan iyo ganacsade kasoo jeeda maamul goboleedka Puntland.
Ganacsadaha oo ku jira goob ganacsi oo uu leeyahay ayaa waxaa si xun ugu dhaawacay shaqsi aan xil kas aheyn oo aanan la garan ujeedada uu ganacsadaha dhaawaca ugu geystay.
Inkasta oo aanan wali la hubin, waxaa laga yaabaa sababta uu shaqsiga ganacsadahaan maanta dhaawaca ugu geystay uu yahay, ayada oo uu ganacsadaha dhaawaca loo geystay oo si weyn uga xumaaday dilkii magaalada Garoowe loogu geystay AUN marxuum Sheikh C/qaadir Nuur Faarax, isla markaana uu ahaa nin aanan hadalka la gaban (outspoken person) ka hadli jiray amuura la xariira nidaamka ka jira deeganada Puntland.
Sida ay warku nagu soo gaarayo, ganacsade Dr. Mahamed Burhaan Ahmed Deeq ayaa waxaa hadda ka hor dhowr jeer waxaa loogu hanjabay in la dili doono, mantana waatan dhacday in sidaan fosha xun loola dhaqmo.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid loo qabtay cidda fal danbiyeedkaan geysatay, balse waxaa socda baritaano aad u balaran oo ku aadan sidii loo heli lahaa cidda dhaawacaan u geystay ganacsade Dr. Mahamed.
Shirwa Jibriil, Nairobi/Kenya.